कात्तिकमै लटरम्म स्याउ फलेपछि जुम्ला रोकायाबाडाका किसान चिन्तित (फोटो कथा सहित ) – Sadarline
कांग्रेस बाँकेको सभापतिमा चार जनाको उम्मेदवारी
रुद्र सुवेदी/ सदरलाइनडटकम ,
जुम्ला, १४ कात्तिक : जुम्ला, चन्दननाथ नगरपालिका–११ रोकायबडाका स्याउ किसान यतिबेला अलमलमा परेका छन् कारण प्राय चैत्रमा फुलेर फल्न सुरु गर्ने स्याउ कात्तिक मै फुलेर लटरम्म फल्न थालेपछि उनीहरु अलमलमा मात्र होईन दङ्ग परेका छन् । जलबायु परिवर्तनको कारण एक सिजन मात्र फल दिने स्याउको बोटले यसवर्षको खेती भित्र्याई सकेको एक महिनामा नै अर्को खेति जस्तै लटरम्म बोटभरी फल लागे पछि किसान आश्चर्यमा परेका हुन् ।
जलबायुमा आएको परिवर्तनको कारण जुम्लाका किसानको खेती गर्ने समयतालिका नै परिवर्तन गर्नपर्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउछन् । पहिला असोज कात्तिकदेखि नै हिउपर्न सुरु हुने भएपनि हिजोआज पुस लागेपछि मात्र हिउपर्ने भएकोले पनि खेतिको समयतालिकामा परिवर्तन आएको उनीहरुको ठम्मयाई छ ।
रोकायबडाका २७ वर्षिय प्रेमबहादुर रोकायको स्याउ बगैचाका केही बोटमा लटरम्म फल र फूलसंगै पहिलो पटक बै मौसमे स्याउ देखेर उनी आफु अचम्ममा परेको बताए । सामान्यतया चैतमा स्याउको फुल फुल्ने र फल लाग्ने भए पनि यसपाली कात्तिकमा बोटभरी लटरम्म स्याउ फलेको देखेपछि दङ्ग हुदै भने, ‘भदौमा मात्र बोटको स्याउ टिपेर बजारमा बिक्री गरेको एक महिना वित्न नपाउँदै पुनः बोटभरी स्याउ फलेपछि आश्चर्यमा परेको छु ।’
आजसम्म वर्षमा एकपटक मात्र बोटमा स्याउ फलेको देखेका यहाँका किसानहरु यसपाली बेसिजनमा स्याउ फलेको भन्दै चिन्तितसमेत बनेका छन् । ‘स्याउ टिपेको एक महिना पनि वितेको छैन, फेरि बगैचाका केही बोटमा सिजनको जस्तै नयाँ फल लाग्यो’–उनले भने,‘आजसम्म यस्तो कहिल्यै भएको थिएन, यसपाली त टिप्न नपाउँदै बोटमा नयाँ स्याउ फल्यो । कतै यो अनर्थ त हुन लागेन ? चैतमा फल्नुपर्ने स्याउ कात्तिकमा पो फल्न थाल्यो त ।’ रोकायाको बगैचामा हिजोआज लटरम्म स्याउ मात्र होईन नजिकै रहेको आरुबखडा पनि फलेको छ ।
जुम्लाका स्याउ खेती गर्ने सबै किसानले भदौको दोस्रो हप्तादेखि असोजको पहिलो हप्ता भित्रमा स्याउ टिपेर बिक्रि गरि सकेका छन् बगैचामा स्याउका बोट सबै रित्ता हुन नपाउदै पुनः एकाएक फल लागेपछि यसअघि चैतमा मात्र स्याउ फलेको देखेको बताउने रोकाय यसपाली कात्तिकमा फलेको स्याउलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सताएको बताए ।
जुम्लाका स्याउ किसान यतिबेला बजारमा बिक्री नभएको स्याउलाई काटेर चाना बनाउने काममा व्यस्त छन् । तर भदौमा स्याउ टिपेको बोटमा नै एक महिनाको अन्तरालमा नयाँ स्याउ लटरम्म फलेपछि किसानहरु दङ्ग मात्र परेका छैनन्, चिन्तित समेत भएका छन् । विगत २५ वर्षदेख स्याउको खेती गर्दै आएका चन्दननाथ–१२ तलिउमका किसान भक्त रोकायाले कात्तिकमा पनि स्याउ फलेको देखेपछि आश्चर्यमा परेको बताए । उनले भने,‘यो त अनौठो भयो, कात्तिकमा पनि स्याउ फल्यो । के हुन लाग्या हो खै ? भर्खरै स्याउ टिपेका थियौं, त्यही बोटमा फेरि नयाँ स्याउ फल्न लाग्यो । यो स्याउ हेर्दैमा ६० प्रतिशत विकशित भै सकेको छ । पाक्न के गर्ने हो ?’स्थानीय किसानको बगैचामा स्याउ मात्र होइन, आरुको बोटमा पनि हिजोआज फल लागेको छ । केही बोटमा भर्खर फुल फुल्न थालेको छ । वर्षमा एक पटकमात्र स्याउ फलाएका किसान यसपाली स्याउ टिपेको एक महिनामा नयाँ फल लागेपछि कृषि कार्यालयमा धाउन थालेका छन् । अधिकांश किसानले बेसिजनमा स्याउ फल्नु शुभ संकेत नभएको भन्दै गाउँमा पुग्ने नयाँ मान्छेसँग यसबारे जानकारी लिने गरि रहेका छन् ।
रोकायाबाडाका स्याउ किसानहरुले पहिलो पटक बारीमा कात्तिकमा स्याउ फलेको र यसले अनर्थ निम्त्याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जुम्लामा स्थानीय बासिन्दा बेसिजनमा कुनै पनि फुल फुल्नु र फल लाग्नुलाई अशुभको संकेतका रुपमा लिने भएकोले आफुहरु चिन्तित भएको उनीहरुको भनाई छ । नजिकै रहेका भक्तले भने–‘ यसपाली कात्तिकमा स्याउ फलेको छ । यसले कुनै अर्नथ पो निम्त्याउने पो हो कि ? वा फल्ने सिजनमा बोटमा फल नै नलाग्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।’ उनीहरुले यसले गाउमा कुनै अनर्थ नहोस भनेर बुढापाकासंग सरसल्लाह गरी रहेको समेत बताएका छन् ।
यसैबीच जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले भने जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा कात्तिकमा स्याउ फलेको हुनसक्ने जनाएको छ । जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा कात्तिकमा पनि स्याउ फलेको भन्दै कार्यालयले जुम्लामा पहिलाको तुलनामा तापक्रम बृद्धि भएकोले कात्तिकमा पनि बोटमा स्याउ फलेको हुनसक्ने जानकारी दिएको छ ।
कार्यालयका कृषि प्राविधिक सहायक लक्षिराम महतले भने,‘स्याउ चैतमा फल्नुपर्ने हो, तर यसपाली कात्तिकमा पनि फलेको खबर पाएका छौं । यो सबै जलवायु परिवर्तनको असर हो, जुम्लामा पहिले भन्दा तापक्रम बढेकाले यसो भएको हो । अर्कोतिर बोटमा किसानले हालेको मलको कारण कुनै हार्मोन बढेर पनि यसो हुनसक्ने संभावना भए पनि जुम्ला अर्गानिक जिल्ला भएकोले यो असंभव नै छ ।’
उनले विगतमा चिसो हुँदा वर्षमा एकपटक मात्र स्याउ फलेको भन्दै यसपाली जलवायु परिवर्तनले टिप्न नपाउँदै नयाँ स्याउ फलेको हुन सक्ने दाबी गरे । ‘कात्तिकमा स्याउ फल्दैमा कुनै अनर्थ हुँदैन, जाडो बढेपछि अहिले फलेको सबै स्याउ आफै खतम हुन्छ’ महतले थपे,‘पहिला असोजमै हिउँले ढाक्थ्यो, अहिले पुस नलागेसम्म हिउँ आउँदैन । तापक्रम बढेकाले पनि कात्तिकमा स्याउ फलेको हो, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’
JUMLA, Nepal : Some 850 kilometers away from Kathmandu lies Jumla, small town enclosed by golden hills situated along the banks of the Tila river. Despite being the zonal headquarters of Karnali, the largest region of the Himalayan country, Jumla has always remained in isolation. The locals of this mountainous […]
२५ कार्तिक २०७६, सोमबार १७:४५